Forum serasera malagasy JIRAMA mapme B - Dinika forum.serasera.org
JIRAMA mapme B
Fitohizan'ny hafatra : JIRAMA mapme B
sahia - 05/03/2015 13:05
Efa nentiko teto ihany lay fampidirana jiro efa t@ 2010, dia FALY aloha ry zareo ny tena fa na ela aza ilay izy dia mba NIVALY IHANY afaka DIMY TAONA TATY AORIANA e, tonga nanao ny installation ry zalahy saingy MAPME @ fitenenana, efa voaloa daholo ny devis rehetra, zany oe tsy misy tokony ialam-bola intsony fa mampiditra ilay jiro ry zareo sisa dia mampiasa izahay nanao ny fangatahana fa tsy izany no zava-nisy: nasainy nividy ATTACHE FIL N°16 miisa 20pces sy POINTE ndray re izahay, @ izay lay metragen'ilay FIL TSY AMPY 3 metre teo ho eo dia tsy afaka nampidirina tao antrano araka ny efa prévu t@ nanaovana ilay fandrefesana tamboalohany fa dia NIHAHAKA TEO ivelan'ny trano lay compteur. Te hisintona ny sainareo tompon'andraikitra ao @ sce depannage Jirama ny tenako oe MILA MBA ASIANA FANARAHA-MASO ny ataon'ireny agent alefanareo manao ny asa ireny fa tena TSY RARINY an, BE LOATRA NY BIZINA ataondry leirony, MERCI an
nannie - 06/03/2015 11:54
Mba tsy notereny hividy kafe 500Ariary ho azy aza... Dia arahabaina izany e !
hery - 06/03/2015 16:06
Tokony nalaina sary daholo ny zavatra nataony. Izany hoe nampahafantarina mialoha ireo agents hoe halainay sary ny zavatra ataonareo raha ratsy dia alefanay any ambony any. Mety oh nanao tsara ihany izy.
Maningana - 11/03/2015 07:55
marina izany voalazan Hery izany nefa koa mety hoe tonga amin'ilay TSY NAMPOIZINA e, dia sady faly ngamba ry zareo fa tonga ihany lay nandrasany ela be dia tsy tao antsainy intsony izay haka sary ny nataon'ireto agent jirama